Nyaya inofadza zvikuru. Ndinofara kuti wataura kuti kushambadzira otomatiki ndeyemakambani eese saizi, nekuti ingano yakajairika kuti mahombe chete anogona kubatsirwa kubva kune otomatiki maturusi.
Zvita 15, 2016 na5:33 PM
Maria, waita basa nemhinduro.
Ndinobvumirana newe zvachose. Iyo ingano yakajairika inofanirwa "kubvongodzwa" !!!
Ndatenda nemazano. Ndiri kuronga kuyedza kushambadzira otomatiki mugore idzva uye pane zvakawanda zvekudzidza. Unofungei nezve mapuratifomu, akadai seGetResponse? Dambudziko remakambani madiki mazhinji ibhajeti rekushambadzira otomatiki software. Ipapo kunouya nguva inodiwa yokurovedza.
Mhoro Edna, wakanyatsondikurudzira kuti ndigovane pfungwa dzangu pakusarudza kwako kweMarketing Automation chikuva. GetResponse ipuratifomu yakasimba - asi iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti unoongorora kuti uchaishandisa sei uye kuti ndezvipi zviwanikwa zvaunazvo kare. Ndanyora pamusoro peizvi zvinhu mukutenga Marketing Automation chikuva pano.
Hunhu hwakanaka, Douglas! Inofanirwa kuverenga kune wese munhu ari kufunga kutenga yekushambadzira otomatiki chikuva. Ndinokutendai nekugovana ruzivo rwenyu.
Edna, ndatenda nemhinduro yako. Handisati ndamboshandisa GetResponse, saka chaizvoizvo, handigoni kupa chero chinhu. Pane dambudziko rebhajeti remakambani madiki, asi ini ndinogona kutaura chokwadi kuti muzviitiko zvakawanda zvakakosha. Mubvunzo wekudzidziswa uripowo asi maturusi mazhinji kana masoftware anopa miedzo yemahara kuti uve nechokwadi chekuti sevhisi inoenderana nezvido zvebhizinesi rako.